हाम्रो सडक यात्रा……..
हाम्रो देशका अधिकांश बिद्यार्थी यसरी भुण्डिएर बिद्यालय जान बाध्य छन
आफ्नै लागी ….
लियो क्लव अफ बुटवल सिद्धवावाको आयोजित टाफिक जनचेतना र्यालिका सहभागी
बुटवलको लुविनी बस टर्मिनल
बुटवलको लुविनी बस टर्मिनल जहा बाट देशका बिभिन्न स्थानमा जाने बस चल्छन । अहिले स्तरोन्नतीको क्रममा छ
सुरक्षित यात्रा अभियान नेपाल
सुरक्षित यात्रा अभियान नेपाल नामक यो संस्था बिसुद्ध सामाजिक सेवा भावना बाट प्रेरित भई स्थापना भएको हो । यस संस्थाका उद्देश्यहरु समाज र दुर्घटना पिडितहरुप्रति लक्षित छन । जुन सुकै संस्था पनि आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्नको लागी सबै संघ संस्थाहरुको सहयोग र समन्वयमा मात्र सम्भव छ । प्रचलित ऐन, कानुन र नियमको अधिनमा रहि यस संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम हनेछ ।
या संस्था जन हितकारि मुनाफारहित संस्था रुपमा रहने छ ।सडक दुर्घटना बिरुद्ध जनचेतना जगाउने । सडक दुर्घटनामा परेका हरुको उद्दार र उपचार गर्ने ।सडक दुर्घटना पिडित लाई शैक्षिक, आर्थिक सहयोग र कानुनी परामर्स प्रदान गर्ने ।सडक दुर्घटना कम गर्न तालिम गोष्ठी र प्रचार प्रसार गर्ने । सडक दुर्घटना स्थलगत अध्यायन गरि सो को बास्तविक कारण र स्थीती अनुसन्धान, गरी राय पेस गर्ने । स्थानिय तहमा बैज्ञानिक सडक निर्माणमा समुदाय लाई उत्साहित गर्ने ।
April 02, 2018 In: विशेष समाचार No comments
कृष्ण खनाल बुटवल, चैत । तपाईं आफ्नो यातायातको साधानमा कुनै नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य केही समान बोकेर हिड्दै हुनुहुन्छ भने कतैबाट चुहिएको त छैन ? ख्याल गर्नुहोला । पछिल्लो समयमा पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले यसरी यातायातको साधानमा राखिएको सामान चुहाउदै ह...	Read more
दुर्घटना न्युनिकरण अभियानमा लागेका पाण्डे सम्मानीत
क्लासिक तथा भिन्टेज गाडीको संरक्षण वारेमा पर्यटन बोर्डको ध्यानाकर्षण
फिचर फोटो ग्यालरी